काठमाडौँमा सिर्जना हार्दै छैनन्, प्रकाशमान र गगन हार्दै छन् | वर्णन मिडिया - सूचना तथा समाचारको संवाहक |
३ लाखभन्दा बढी मतदाता रहेको देशको संघीय राजधानीको चुनावमा झण्डै २ लाख मत खसेको छ
२०७९ जेष्ठ १, आईतवार ०४:४२:००
काठमाडौँ । मतदानको सुरुवाती रुझान र केही सर्वेक्षणहरुलाई हेर्दा काठमाडौँ महानगरपालिकाको प्रमुख पदमा अब बालेन्द्र शाह पुग्ने देखिएको छ । ३ लाखभन्दा बढी मतदाता रहेको देशको संघीय राजधानीको चुनावमा झण्डै २ लाख मत खसेको छ । त्यसमध्ये अहिले एकाध प्रतिशत मात्र मत गनिएको किन नहोस् ? सुरुदेखि एकै मतदानको प्रवृत्ति एकनासको देखिएकाले अन्तिमसम्मै यही रहने आकलन गरिएको छ ।
काठमाडौँ मात्र होइन, सिंगो मुलुकमा झण्डै शताब्दीदेखि ८ दशकदेखि जरा गाडेर बसेका परम्परागत शक्तिहरुलाई एक्ला बालेनले कसरी चुनौती दिन सके ? उनलाई काठमाडौँका मतदाताले के आधारमा पत्याए ? किन उनीप्रति मत ओइरियो ? यो निकै रोचक र बहसयोग्य छ ।
उम्मेदवारको योग्यताका आधारमा जनताले गरेको फैसला मात्र भनेर काठमाडौँको यस मत प्रवृत्तिलाई सामान्य रुपमा लिन सकिँदैन । परम्परागत शक्तिहरुप्रतिको वितृष्णाले पनि यसमा काम गरेको छ । यी शक्तिहरुका व्यवहारबाट वाक्कदिक्क भएका काठमाडौँवासीले परिवर्तन र विकल्प खोजेको पनि यसबाट बुझ्न सकिन्छ ।
केशव स्थापित यसअघि नै बारम्बार मौका पाइसकेका र परीक्षित भइसकेका हुन् । सीमान्त उपयोगिता ह्रासको नियमतले पनि अब मतदाताको मेन्युमा उनी पर्ने सम्भावना कम रहेको कुरो एमालेले बुझ्न सकेन । अझ भन्दा गएका २५ वर्षमा एमालेले काठमाडौँको मेयर बन्न सक्ने गतिलो उम्मेदवार पनि तयार गर्न सकेको रहेनछ भन्ने यसबाट देखिन्छ ।
माथिका यी कुनै पनि कारणभन्दा बढी शक्तिशाली कारण भने अर्कै छ । त्यो हो, काठमाडौँ गणेशमान सिंहको विरासतको बहिष्कार हो । अब कुनै रङ, छाला वा हड्डी देखाएर गरिने राजनीतिलाई काठमाडौँमा ठाउँ छैन भन्ने जबरजस्त सन्देश यस चुनावमा मतदाताले व्यक्त गरेका छन् ।
गणेशमानको विरासतको अस्वीकृति भनेको काठमाडौँमा अब प्रकाशमान सिंहको राजनीतिक भुइँ भासिनु हो । प्रकाशमान मात्रको के कुरा ? गगन थापाको नाकमा समेत यस चुनावले कडा दम दिएको छ । किनभने, सिर्जना सिंहलाई उनले कांग्रेस महामन्त्री र काठमाडौँकै सांसदका हैसियतले आफ्नो उम्मेदवार भनेर काँधमा बाकेका थिए ।
वास्तवमा भन्ने हो भने गगन वंशवादी राजनीतिविरोधी एक विम्बको नाम हो । उनले गणेशमान वा प्रकाशमान सिंहको परिवारको कोही सदस्य भएकै कारण देशको सबैभन्दा धेरै स्रोतसाधन भएको स्थानीय सरकार जिम्मा लगाउन सजिलै तयार हुनुपर्ने बाध्यता थियो वा गगनले आफ्नो वास्तविक चरित्र यतिखेर प्रदर्शन गरेका हुन्, यो कुरा खुल्दै जाला । तर, गगन जसरी सिर्जना सिंहका निम्ति चुनावमा होमिएका र खटिएका थिए, त्यसमा काठमाडौँवासीले बलियो आवाजमा ‘नो’ भनेका छन् । गगनलाई पनि काठमाडौँवासीले ‘नो’ भन्नु उनको राजनीतिक भविष्य धरापमा छ भन्नु हो ।
गगन दोगला चरित्रका नेता हुन् भन्ने त धेरैले भलीभाँती जानेकै कुरा थियो । काठमाडौँवासीले पनि उनको त्यस चरित्रलाई राम्ररी छामेर यही चुनावबाट उचित निर्णय दिएको देखिँदै छ । तसर्थ, यो काठमाडौँ महानगरको चुनावका कुनै एक बालेन शाह मात्र जित्दै छैनन् । कुनै एक सिर्जना सिंहको राजनीतिक यात्रामा बिराम लाग्दै छैन । यस चुनावले प्रकाशमान सिंह र गगन थापालाई समेत एकसाथ हराइदिएको छ । काठमाडौँवासीले प्रकाशमान र गगनलाई एकसाथ भनिदिएका छन्, ‘तिमीहरु हाम्रो प्रतिनिधित्व गर्न र हामीमाथि शासन गर्न लायक छैनौ ।’